Sidee Ayaad Ku Ogaan Kartaa Qofka Aad Jeclaatay Inuu Asagana Kaa Hellay??!!.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: March 6, 2014, 4:26 pm
Maqaalkeena maantay waxaanu ugu hadli doonaa side beey gabadhu ku ogaan kartaa wiilka aay lakulantay marar aan badneyn ayadoo jaceyl uqaaday balse aaysan garaneyn inuu asiga jaceylyahay, midaas oo dumarka qaarkii ku bauurto jahwareer taasoo sababto in aay qarsadaan jaceylkooda maadaama aaysan hubin inuu wiiilka uu daneynayo.
Haddaba maantay aan falanqeeyo sida aay ku ogaan karto gabadhu inuu wiilka daneynayo, uusan jaceylkeeda unoqon halbacaad lagu lisay.
Aqristoow adiga xattaa inee kusoo martay waa laga yaabaa intaad qof jeclaatay dabadeed aad awoodi weeysay inaad usheegto adigoo kacabsanayo inuu xiriir kale leeyahay ama aadan hubin inuu kudaneynayo, haddaba maqaalkan ku ogoow in qofkaad kaheshay oo aadan marar badan kulmina ama uu mararka qaar gurigiina , deriskiina ama goobta shaqada aad ku kulantaan in uu kudaneynayo.
Soo Jiidasho wuxuu isku dayayaa goobaha aad joogto markuu soo aaday inuu soo xirto dhar soo jiidasho leh, markuu soo gaaro goobta aad joogtana salaanta asigaaba kugu bilaabayo salaanta kadibna wuxuu kugu xijinayaa cawo bari, “Sidee kubarisay”.
Eegid markaad kudhex jirto bulsho asagana oo isla goobtaas joogo waxaad arkeysaa asagoo si toos ah kuu daawanayo “Kuu eegayo” markii aad fiirisana inta uu ismashquuliyo ayuu ugu yaraan garka qabsanayaa ama indhaha waxaan kujirin iska bixinayaa. Markii aad keli isku tihiina haka sugin inuu indhaha indhaha kuusaaro, balse haduu jaceyl saameeyay uu kuqabo keli markaad tihiin indho naxariis leh ayuu indhaha kuusaarayaa, balse waqtigaas waa markaad goob aanan shanqar kayeereyn aad joogtaaan.
Lamafilaan mararka qaar wuxuu kaaga soo muuqanayaa ama kaaga hor imaanayaa meelo aadan kafileyn inuu kaaga hor imaan karo, sida adigoo iskuul ama adeeg kayimid ayaad arkeysaa asagoo wadada kaaga hor imaanayo , hor imaashahaas kutalo gal bey katahay balse wuxuu kaaga dhigayaa inuu meel usocday sida saaxiibkiis.
Isbadbadel waxaad ku arkeeysaa inuu mararka qaar sameynayo wax aad kufaraxdo halka mararka qaarna aad kala kulmeyso wax kaaxanaajiyo.
Hinaasid marka uu arko adigoo dhalinyaro lasocdo waa uu maseerayaa xattaa haduu ogyahay inaad qaraabo tihiin midaas oo ah mida ugu sahlan aad kuxaqiiqsan karto, markuu kugu arko adigoo wiilal laqoslayo wuxuu isku dayaa inaa kaa goosto maalin markii uu maqnaado inta uu isa soo celin waayo ayaad hadana arkeysaa asagoo hortaada taagan.
Waxaanu kazoo hadalnay sidaad ku ogaan karto inu kujeceylyahay qof aad lakulantay dhowr jeer aad ugu shakisay inuu kujeceylyahay iyo inkale.
Hadii Aad Tahay Aabo Markaa Gurigada Imaato Keebaa Ku Hormartaa Hooyada Iyo Caruurtaadaa..